उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह हुन थालेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालय आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनमा जुटेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा दिनमा एक सय जनाभन्दा बढी संक्रमित देखिएपछि आइसोलेसनका लागि खाली भवन खोज्न थालिएको हो ।
आयुर्वेद अस्पताल वरिपरि खाली भवन खोजेर थप आठ सय जना व्यवस्थापन गर्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । मनमोहन अस्पतालले मेडिकल कलेजका लागि तयार गरेको इचंगुनारायणको भवनमा पनि दुई सय जना व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । ‘कीर्तिपुर र मनमोहनको भवन पनि भरिए खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरणको भवनलाई प्रयोग गर्ने योजना छ,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. अधिकारीले भने ।
सरकारी अस्पतालले मात्रै सम्भव नभए ठूला हब अस्पताल र स्याटलाइट अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा राख्न छलफल भइरहेको डा. अधिकारीले बताए । धुलिखेल, सिभिल, वीर, पाटन, टिचिङ र आर्मी हब अस्पताल हुन् । यी अस्पतालको मातहतमा रहेका स्याटलाइट अस्पतालबाट संक्रमितको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, योजना बनाएर ल्याउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
९२ संक्रमित थपिए
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा आइतबार ९२ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या १ हजार १ सय ३६ पुगेको छ । काठमाडौंका ९ सय १२ संक्रमितमध्ये १ सय १६ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । ललितपुरमा १ सय ३९ र भक्तपुरमा ८५ संक्रमित भएकामा ३२–३२ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । उपत्यकामा ६ जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले उपत्यकामा संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ६४ प्रतिशत बाहिरबाट आएको पाइएको बताए । ‘संक्रमितको संख्या बढेसँगै कुनै पनि ठाउँ सुरक्षित छैन । सचेत हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् । सावधानी अपनाइएको छैन । पसल र रेस्टुरेन्टमा भीडभाड हुँदा हामीलाई तनाव हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ८१ जनाको पीसीआर गर्दा आइतबार ४ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । यसमा तीन जना मन्त्रालयका सहयोगी हुन् । एक जना भने सर्वसाधारण हुन् । ‘मन्त्रालयमा चिया दिने कर्मचारीलाई समेत कोरोना देखिएपछि थप जोखिम बढेको छ,’ ईडीसीडीका निर्देशक डा. पाण्डेले भने ।
ईडीसीडीका अनुसार गंगालाल अस्पतालमा थप चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गंगालालमा संक्रमितको संख्या १६ जना पुगेको छ । त्यस्तै एभरेस्ट बैंकमा तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रहरी र अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि समुदायमा फैलने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका संक्रमित प्रहरीले परिवार र आफन्तलाई समेत सारेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।
अब फेरि लकडाउन होला ? यस्तो छ सरकारको तयारी
नेपाल र चीनबीचमा सीमा समस्या छैन : परराष्ट्रमन्त्री ...
कोभिड–१९ को एन्टिभाइरल औषधि फाभिर–२०० नेपालमै उत्...
तौल घटाउनुछ भने चिसो पानीले नुहाउनुस्
के ग्यास्ट्रिकले सतायो ? खाली पेटमा लसुन खानुस